Kooxaha Xagjirka ah maxay u daliishadaan la dagaallanka dowladaha? -DHAGAYSO – Radio Muqdisho
Kooxaha Xagjirka ah maxay u daliishadaan la dagaallanka dowladaha? -DHAGAYSO
Kooxo badan oo xagjir ah ayaa dagaallo kula jira qaar ka mid ah dowladaha muslimiinta ee caalamka.
Meelo badan ayay kooxahaani ka wadaan dagaal ay ku sheegayaan inuu jihaad yahay laakin ay kula jiraan dad muslimiin ah iyo dowladahooda.
Kooxahaas waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo Soomaaliya ka wadda dagaal ay dad badani ku dhinteen, ka sokoow dagaalka, kooxdani waxay ficillo diinta Islaamka ka fog, sida ay dadka lagu dhex dilo masaajidda iyo in qof ashahaadanayo la gowraco.
Sidoo kale, Kooxda ISIS ayaa dagaallo ka wadda Ciraaq iyo Suuriya, kuwaas oo saameyn ku yeeshay dad badan oo aan waxba galabsan, dagaallada waxay kula jiraan dowladaha waddamadaasi.
Dhammaan kooxahani waxay sheegaan inay “Jihaad” ku jiraan, ayagoo dowladaha ka jira dalalkaana gaaleysiiya.
Barnaamijkeena Tubta Toosan ee toddobaadkaan ayaan uga hadalnay marmarsiyada kooxaha xagjirka ah ee la dagaallanka dowladaha, waxaana marti noogu ah Sheekh Axmed Cali Cusmaan.
Taliska nabadgelyada waddooyinka oo ka digay dadka sida sharci darrada ah u wada gaadiidka
Danjiraha Soomaaliya ee Koonfur Afrika oo laga guddoomay warqadaha aqoonsiga “SAWIRRO”
Danjiraha Soomaaliya ee Koonfur Afrika oo laga guddoomay warqadaha aqoonsiga "SAWIRRO"